Iindidi ze-7 zexabiso elisisiseko ekufuneka umntwana ngamnye alifunde kubomi bakhe ... Oomama Namhlanje
Iindidi ezi-7 zexabiso elisisiseko ekufuneka umntwana ngamnye alifunde kubomi babo ekuhlaleni
UAlicia tomero | 25/05/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 25/05/2021 10:02 | ekufundeni, Iingcebiso, Intsapho
Los xabiso Yinxalenye esisiseko kwimfundo yabantwana bethu. Ukuba abantwana abanakho ukuphuhlisa isakhono sokuqonda okanye ukuxabisa yonke into ebangqongileyo ngokungcono, kwaye ngenxa yoko banokubalungelelanisa nokuqonda kwabo kwaye bonwabe ngakumbi.
Iimpawu zininzi, kwaye Zonke zinokwenziwa ngenxa yokuba zibalulekile ekukhuliseni umntwana, kuba baya kukhulela kwindawo esempilweni kwaye ethobekileyo. Ngabazali ekufuneka begxininisile kwezi zixabiso kwaye menze akubone kwaye akuqonde. Ukuba abazali bathatha inxaxheba ekulandeleni uphawu olwahlukileyo lweempawu, abantwana baya kulandela umzekelo omnye.
Iimpawu ezisisiseko ekufanele ukuba wonke umntwana azifunde kubomi babo ekuhlaleni
Kancinci kancinci, njengoko abantwana bethu bekhula, amaxabiso athile anikwa ngokubaluleka ngakumbi kunamanyeKukwenzeka into efanayo nakuthi abo bangabahlohli. Xa bebancinci bafunda ixabiso le uthando, imbeko nombulelo.
Njengoko zidityanisiwe noluntu luphela amaxabiso abo ayenyuka kwaye sele beqala ukuba ngabantu ngakumbi, apho intlalontle kunye nenkcubeko zivela khona. Ngaphantsi kweli nqanaba, kunokwenzeka ukuba uphuhlise amanqaku amaninzi anokukhokelela kwimeko yefilosofi, apho kuya kubakho isimilo kunye nezenzo ezingayi kufaneleka ukuzingca nentlonipho.
Uxanduva: Eli xabiso lifundwa kumncinci kakhulu kwaye liyaqhubeka nokuba ngumzekelo kubo bonke ubomi. kuthetha ukuba yazi into oyenzayo kwaye ziziphi iziphumo ekuza kuvela kuzo, zilungile okanye zibi. Njengenqaku elibalulekileyo kufuneka lixabise kwaye lithathe uxanduva ngezenzo.
Isisa: lixabiso umntu azama ukufundisa ngalo esemncinci kakhulu. Nangona ingaphenduki ukuba ifundwe isencinci kakhulu njengoko ingenakuphuhliswa ngokwendalo, kodwa ngokuxhomekeke kubudala kufuneka ihlonitshwe. Nangona kunjalo, eli xabiso alityeshelwa, kufuneka siqhubeke nokugcina le mfundiso, ukusukela ukusilela kwayo kudala abantu abazicingela bodwa nabazicingela bodwa. Ukwabelana ngesisa kukholelwa ukuba nabanye abantu banjalo.
Ukuthobeka: luphawu olusisiseko lokukwazi ukuvuma ngovelwano ukuba bonke abantu bayalingana kwaye ke oko kukhokelela kwintlonipho. Ukuqala ukuthobeka kufuneka kuqala zijonge kwaye uqaphele ukuba sinezinto ezintle nezimbi, ukuba akukho mntu ugqibelele. Ke ngoko kuya kufuneka xabisa izinto ezintle ezenziwa ngabanye abantu kwaye ungajongi nje iziphene zabo.
Umbulelo: Ukuziva unombulelo yeyona nkcukacha ibalaseleyo ukuze ube ngumntu opheleleyo, owonwabileyo kunye nokuzithiba okukhulu. Kubalulekile ukufundisa eli xabiso ukuze bazive umbulelo ngayo yonke into ebangqongileyo Kwaye baziva ngathi nabo bonke abantu abanikela ngexesha labo kunye nomzamo kwabanye abantu. Uthando lwabazali luthatha imali eninzi kunye nexesha kwaye oku kuthetha ukuba ungaqala ukufundisa apho umbulelo uqala khona.
Ukunyaniseka: Lo mgangatho wenza ubophelelo ngokunyaniseka nokuthobeka. Kuya kufuneka siqale ngokubonisa ukuba akukho mntu ugqibeleleyo, ukuba singabantu abenza iimpazamo kwaye banokufunda lungisa ukuba senze impazamo, ngaphandle kokusebenzisa ubuxoki. Sebenzisa ubuxoki kuya kwenza ukuba abantu bangagqityi ukonwaba kunye nokunyaniseka ngakumbi.
Ubuwena: Eli xabiso liyinxalenye yokuzibamba komntu, lisenza sizihloniphe kwaye sizixabise njengoko sinjalo. Ukuzithanda kufanele kube phambili emntwini kwaye ngakumbi emntwaneni. Musa ukushiya okanye uzive ungaphantsi kwabanye kwaye ungavumeli nabani na ukuba asinyathele. Ukuncoma okanye ukuncoma okuvela kubazali kulungile, kodwa kufuneka usisebenzise kakuhle esi sixhobo kwaye usisebenzise ngokufanelekileyo ukuze ungenzi abantwana abanekratshi eliphezulu.
Uvelwano nobuhlobo: kubalulekile ukuhlala kunye nokuba nabahlobo. Kuyinxalenye ebalulekileyo yokukwazi ukuba nenkxaso eyongezelelweyo ukongeza kusapho kwaye kufuneka uyilwele. Abahlobo bokwenene kufuneka baphumelele kwaye nabo kufuneka banikezele ngeyona milinganiselo yabo. Ubuhlobo benza amava abelwane, axhase kwaye apho kukho wonke umntu ofunekayo.
Akwanelanga ukuhlala ecaleni komntwana wakho kwaye uxele ukuba yeyiphi imilinganiselo ekufuneka eyibonisile, Ezi mpawu zenziwe ngokufundisa kunye nokucebisa ngeenyani kunye nezenzos. Abazali yeyona modeli ilungileyo njengesifundo ebomini. Ukwazi okungakumbi malunga nesi sihloko ungafunda malunga «amaxabiso adluliswa ziimovie zeDisney»Okanye «Iincwadi ezinconyelwayo zaBafundi kwiMilinganiselo«.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Phuhliso » ekufundeni » Iindidi ezi-7 zexabiso elisisiseko ekufuneka umntwana ngamnye alifunde kubomi babo ekuhlaleni
Ngaba idlala lengqula likuchaphazela njani ukuchuma?
Ukondla abantwana ehlotyeni